Sorona Masina ny 11/02/2019 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 11/02/2019
Jen. 1, 1-19
Niteny Andriamanitra, ary dia vita araka izay nolazainy.
Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tsy nisy endrika sady foana ny tany; ny haizina nanarona ny hantsana ary ny Fanahin’Andriamanitra nisonenika tambonin’ny rano. Hoy Andriamanitra: “Misia ny mazava.” Dia nisy ny mazava. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara ny mazava. Nosarahin’Andriamanitra ny mazava sy ny haizina. Ka ny mazava nataony hoe andro. Ary ny maizina kosa alina. Dia nisy hariva, ary nisy maraina. Izay no andro voalohany. Hoy Andriamanitra: “Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano, ary aoka izy hampisaraka ny rano amin’ny rano.” Dia nataon’Andriamanitra ny habakabaka, ka ny rano ambonin’ny habakabaka dia nosarahiny tamin’ny rano ambanin’ny habakabaka, dia tanteraka izany. Nataon’Andriamanitra hoe lanitra, ny habakabaka. Ary nisy hariva sy nisy maraina. Izay no andro faharoa. Hoy Andriamanitra: “Aoka hiangona amin’ny fitoerana iray ny rano eo ambanin’ny lanitra, ka aoka hiseho ny maina.” Dia tanteraka izany. Nataon’Andriamanitra hoe tany, ny maina; ary nataony hoe ranomasina, ny rano tafangona, ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Dia hoy Andriamanitra: “Aoka ny tany haniry ahitra maitso sy anana mamoa ary hazo mamoa, samy mamoa misy ny voany ao aminy, araka ny karazany avy, eny ambonin’ny tany.” Dia tanteraka izany. Ary ny tany naniry ahitra maitso sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary hazo mamoa misy ny voany ao aminy, samy araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina; izay no andro fahatelo. Hoy Andriamanitra: “Misia fanazavana eo amin’ny habakabaky ny lanitra, mba hampisaraka ny andro sy ny alina ; ary aoka izy ho famantarana, ka hanamarika ny fotoana, ny andro, ny taona; ary aoka ho fanazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hanazava ny tany.” Dia tanteraka izany. Nanao ny fanazavana roa lehibe Andriamanitra; ny lehibebe kokoa hitarika ny andro, ny kelikely kokoa hitarika ny alina, ary nanao ny kintana koa. Napetrak’Andriamanitra eo amin’ny habakabaky ny lanitra ireo hanazava ny tany, hitarika ny andro sy ny alina, hampisaraka ny mazava sy ny maizina; ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina; izay no andro fahefatra.
Salamo 103, 1-2a. 5-6. 10 sy 12. 24 sy 35d
Fiv.: Ny Tompo anie hifaly amin’ny asany.
Ianao nandraikitra ny tany tamin’ny fanorenany, mba tsy hihetsehany mandrakizay! Ny ranobe no toa bodofotsy narakotrao azy: ka nianina teny an-tampon’ny vohitra ny rano.
Nampiboika loharano teny an-dohasaha Ianao, sy nitarika azy ho eny anelanelam-bohitra; hitoeran’ny voron’ny lanitra eo amboniny, ka hikarantsanany anaty ravin-kazo!
Drey ny hamaroan’ny asanao, ry Tompo! Sady vita amim-pahendrena avokoa! Ny tany henika ny harenao! Isaory ny Tompo, ry fanahiko!